Doogee V20: mutengo uye zuva rekuburitsa | Gadget nhau
Doogee V20: mutengo uye zuva rekuburitsa
Ignatius Room | 13/01/2022 08:56 | Nhare mbozha
Imwe yevagadziri ve smartphone iyo yakatarisana nebasa rayo pane rugged smartphones kuDoogee, mugadziri uyo gore rega rega anotanga a. hupamhi hwezvishandiso zvemabhajeti ese uye nokudaro kusangana nezvinodiwa nenhamba huru yevashandisi.
Mugadziri uyu achangobva kuzivisa zviri pamutemo terminal nyowani. Tiri kutaura nezvazvo Dodge V20, terminal iyo mugadziri uyu anoda kuzviisa pachezvayo se bhenji mune yakaomeswa smartphone chikamu, kwete chete kupikisa kwayo asiwo nokuda kwekushanda kwayo kwepamusoro.
Kana iwe uchitsvaga ruggedized smartphone uye mugadziri Doogee ari pakati pemhando dziri kufunga senge sarudzo, isu tinokuratidza. zvese zvakatemwa zveiyo Doogee V20 nyowani.
1 Zvinotsanangurwa zveDoogee V20
3 AMOLED kuratidza
4 3 kamera kune chero mamiriro ezvinhu
5 Kurwisana nemhando dzose dzekuvhundutsa
6 2 zuva bhatiri
7 Mavara, kuwanikwa uye mutengo weDoogee V20
Zvinotsanangurwa zveDoogee V20
Processor 8 cores ine 5G chip
RAM ndangariro 8GB LPDDR4x
Self Storage 266 GB UFS 2.2 - inowedzerwa kusvika ku512 GB ine microSD kadhi
Main screen 6.4-inch AMOLED yakagadzirwa neSamsung - Resolution 2400 x 1080 - Ratio 20:9 - 409 DPI - Kusiyana 1:80000 - 90 Hz
yechipiri skrini Inowanikwa kumashure padivi peiyo yemifananidzo module ine 1.05 inches
Makamera ekumashure 64 MP main sensor ine Artificial Intelligence - HDR - Husiku maitiro
20 MP yekuona husiku sensor
Certification IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
Hitakaenda 6.000 mAh - Inotsigira 33W nekukurumidza kuchaja - Inotsigira 15W isina waya yekuchaja
Zviri mubhokisi 33W charger - USB-C yekuchaja tambo - Chinyorwa chekuraira - Screen dziviriro
Kana iwe usingawanzo kuvandudza yako smartphone gore rega rega, iwe unofanirwa kutanga kufunga nezve mukana we sarudza modhi ye5G.
Kunyangwe kuchine nguva yekuti 5G network iwanikwe muSpain yese nekune dzimwe nyika, kuwana smartphone senge Doogee V20 5G ichakubvumidza kuti utore.Nakidzwa nekumhanya kwakanyanya kweinternet pane chako kifaa kwemakore anotevera.
Iyo Doogee V20 inotungamirwa nea 8 yakakosha processor, pamwe ne8 GB ye RAM mhando yeLPDDR4X memory kuitira kuti mitambo nemaapplication amhanye nekumhanya kunokwanisika.
Nezve kuchengetedza, imwe yeanonyanya kukosha mapoinzi nhasi kana uchitenga smartphone, neDoogee V20 isu hatisi kuzosiiwa kumashure, nekuti inosanganisira. 256 GB yenzvimbo mhando UFS 2.2. Kana ikadonha, unogona kuwedzera nzvimbo yacho nekadhi reMicroSD kusvika pakureba kwe512 GB.
Mukati meDoogee V20, tinowana Android 11, izvo zvinotitendera kuisa chero application inowanikwa mu Play Store.
Iyo Android vhezheni inowanikwa muDoogee V20, inosanganisira a diki customization layer, saka hazvizove zvinonetsa kukwanisa kuwana zvakanyanya kubva mairi pasina kutambura nemaapplication ayo vagadziri vanowanzoisa uye kuti, kazhinji, hapana anoshandisa.
Sezvo mutengo wemasikirini ane OLED tekinoroji wave kufarirwa, munhu wese angade kukwanisa kunakidzwa nemhando yainotipa. Iyo Doogee V20 inosanganisira a AMOLED-mhando skrini inogadzirwa neSamsung (mugadziri mukuru wemafoni emafoni munyika).
Iyo skrini inosvika 6,43 inches ine resolution ye2400 × 1080 pixels, kupenya kwe500 nits uye musiyano we80000: 1., pixel density ye409 uye kufukidzwa kwemavara kwe105% muNTSC gamut.
Uye zvakare, ine 90 Hz yekuvandudza mwero. Nekuda kwechiyero chakanyanya chekuzorodza ichi, mitambo yese ine maapplication uye kubhurawuza pawebhu inotaridza kutenderera kwakawanda kwemvura patinoishandisa.
Chidzitiro chekumberi chemudziyo uyu Haisi iyo chete inosanganisira, Sezvo, kumashure, isu tichazowanawo 1,05-inch skrini kumashure, kurudyi kwekamera module.
Iyi mini skrini inogona kugadzirwa neakasiyana madhizaini ewachi kuratidza nguva, bhatiri ... pamwe nekugona kuishandisa kurembera kana kutora mafoni, ona zviziviso uye zviyeuchidzo... Kana iwe kazhinji uine foni ine sikirini yakatarisa pasi patafura yako, iyi mhando yechidzitiro yakakunakira.
3 kamera kune chero mamiriro ezvinhu
Sezvandambotaura pamusoro, kumashure kweDoogee V20, tinowana a mafoto module ane matatu makamera, makamera atinogona kuvhara nawo chero chidikanwi chatingave nacho nguva dzese, kungave kunze, mumba, husiku ...
64 MP main sensor nehungwaru hwekugadzira. Iyo ine aperture yef / 1,8 uye yekuona zoom yeX.
Kamera ye 20 MP husiku chiratidzo iyo inotibvumira kutora mapikicha nemavhidhiyo murima (inoshanda zvakafanana nechero kamera yekuchengetedza).
8 MP Ultra yakafara kona iyo inotipa kona yekutarisa ye130 madhigirii, yakanakira mafoto ezviyeuchidzo, mapoka evanhu, zvemukati ...
La kamera yekumberi yeDoogee V20 Iyo ine resolution ye16 MP.
Kurwisana nemhando dzose dzekuvhundutsa
Kana iwe uchitsvaga yakaomarara smartphone inopesana nemarudzi ese enzvimbo uye kuvhunduka pasina kusiya tekinoroji yemazuva ano, iyo Doogee V20 ndiyo smartphone yauri kutsvaga.
Iyo Doogee V20 haina chete iyo zvakajairika zvitupa IP68 uye IP69K, asi zvakare inosanganisira chitupa chegiredhi remauto, MIL-STD-810.
Ichi chitupa hachingodzivise chero guruva kana mvura kupinda mudziyo wedu, asiwo inodzivirira mudziyo usati wachinja tembiricha.
2 zuva bhatiri
Bhatiri ratinowana mukati meDoogee V20 rinosvika kune 6.000 naRaama, huwandu hunotibvumira kunakidzwa nemudziyo uyu nguva dzose kwemazuva maviri kana matatu.
Uye zvakare, inoenderana ne 33W inokurumidza kubhadharisa kuburikidza ne USB-C port. Iyo zvakare inotsigira 15W isina waya yekuchaja.
Mavara, kuwanikwa uye mutengo weDoogee V20
Iyo Doogee V20 icharova musika muna Kukadzi 21 uye ichaita saizvozvo mune matatu mavara: knight mutema, Wine dzvuku y phantom grey uye 2 marudzi ekupedzisa: carbon fiber uye matte kupera.
Para kupemberera kuvhurwa kwemusika kweDoogee V20, mugadziri anopa kutengesa ekutanga chiuru mayunitsi pamutengo we $ 1.000 pamusoro pemutengo wayo wenguva dzose, nemutengo wayo wekupedzisira we $ 299.
El mutengo wakajairika weiyi terminal, kana kusimudzirwa kwapera i399 madhora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Nhare mbozha » Doogee V20: mutengo uye zuva rekuburitsa